विचित्र संसार – tvNEPALI
अन्तरीक्षबाट खस्ने ढुंगाले पृथ्वी...
नासाका वैज्ञानिकहरुले अब आउने शताब्दीमा अन्तरीक्षबाट भयनाक ढुंगा पृथ्वी तर्फ आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले उक्त भयानक ढुंगा आकारमा अत्यन्त ठूलो भएका कारण हालसम्मका वैज्ञानिक उपकरणहरुले रोक्न सकिने सम्भावना कम भएको बताएका छन् । वैज्ञानिकहरुका अनुसार उक्त ढुंगा...
किन सरिरहन्छ धरहरा निर्माणको...
काठमाडौं । भूकम्पले भत्किएको धरहरा निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति मंगलबार चौथो पटक पनि स्थगित भयो । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माणसम्बन्धी सूचना गत वैशाख ३१ मा प्रकाशन गरेको थियो । सूचनामा दिइएको समयमा छ...
जिउदै पुरिन खोजेर एक...
कुनै मान्छेले आफ्नो चिहान आफै खान्छ होला त ? के यो सम्भव छ त जस्तो लाग्छ यो सबैलाई चकित पर्ने घटना छ । भारतको आन्ध्र प्रदेश राज्यको गन्नावरममा यस्तो आश्चर्यजनक घटना भएको हो । ७० वर्षका एक वृद्धले आफ्नो चिहान आफैं...
शोधकर्ताले पत्ता लगाए सनसनीपूर्ण...
के तपाइँलाई थाहा छ, तपाइँलाई एक्लै छाडेर मृत्युवरण गरेको तपाइँको जिवनसाथी मृत्युपछि पनि तपाइँ साथै रहन्छ । एक नयाँ अध्ययन अनुसार यो कुराको खुलासा भएको छ । मरेपछि भौतिक रुपमा सँगै रहने त कुरा भएन, जिवनसाथीका विभिन्न आनीबानीहरु तपाइँसँगै जोडिइरहेका...
रवि लामिछानेले लाइभमा ल्याए,...
टिभीनेपाली, पथरीशनिश्चरे । रवि लामिछानेले आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रम सिधाकुरा जनतासँगमा आज फरक प्रतिभा भएका एक बालकलाई ल्याएका छन् । आफ्नो कार्यक्रम सिधाकुरा जनतासँगको २५० भाग पुरा भएको उपलक्ष्यमा फरक प्रतिभा भएका बालकलाई ल्याएको उनले बताएका छन् । कपिलवस्तुका अविरल पोखेरल...
नेपालमानै घटयो अचम्मको घटना,...
दाङका एउटा घटनाले सबैलाई चकित र आश्चर्य बनाएको छ । दाङको राप्ती गाउँपालिका ४ मौरीघाटका ४५ वर्षिय महेन्द्रप्रसाद चौधरीको मृत्यु भयो । गएको असार २१ गते कालिका सामुदायिक वनमा भेटिएको महेन्द्रप्रसादको शव प्रहरीसँग बुझेर परिवारले दाहसंस्कार गरेका थिए । तर,...
कस्तो अचम्म! बर्गरको लिलामीमा...
संसारमा विभिन्न किसिमका घटना घटी रहेको हामी देख्छौ र सुन्छौ तर यो घटना भने अलि अनौठो किसिमको नै छ। प्राय जसो पुरानो सामानहरु यस्तो हुन्छ कि जसको मूल्य निकै नै धेरै हुन्छ र आजको जमानामा त्यस्तो पुरानो सामानहरु कमै पाइन्छ।...
एउटा पहाडै काटेर चिनियाले...
चीनमा संसारलाई चकित पार्ने खालका धेरै कुराहरु बनिने गर्दछन । मानिसले कल्पना सम्म नगरेका कुराहरुको खोज गरि निर्माण गर्ने गर्दछन चिनियाहरू । अहिले फेरी यस्तो कुराको निर्माण गर्दैछन जुन अरु देशका लागि कठिन हुन सक्दछ । चिनियाँ कामदारहरुले नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्न एउटा...
सफ्टवेयर इन्जिनियर आफ्नो जागिरको...
संसार पनि कति बिचित्रको छ र त्यो भन्दा बिचित्र यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरु बिचित्र छन । उनीहरु शोक र चाहना पनि अनेक हुने गर्दछ । मानिसहरु जागिरबाट अवकाश पाउने दिनलाई निकै स्मरणीय बनाउन चाहन्छन । तर भारतको बैंगलोरका एक व्यक्तिले अनौठो तरिकाले आफ्नो...
अनुहार चम्किलो पार्न र...
गाईको मुत्रलाई गहुत बनाएर खाने चलन पहिल्यै देखि आएको छ । विभिन्न पुजा-आजा हुदा यसको सेवन गर्ने गरिन्छ । तर अहिले यहि गाईको मुत्र सम्बन्धि एउटा अनौठो घटना बाहिर आएको छ । एकजना महिलाले आफ्नो अनुहार चम्किलो पार्न र अनुहारका दागधब्बा हटाउन भन्दै...
प्रयोग भएका प्याड जलाउन...
प्लास्टिक बाट बनेका कुराहरु गाडे पनि कुहिदैन जस्तै रजश्वला भएका महिलाले प्रयोग गर्ने प्याड । यहि नकुहिने कुरालाई नष्ट गर्ने र वातावरणलाइ पनि असर नपार्ने मेसिन बनिएको छ । भारतको नागरपुरस्थित नेसनल इन्भारोमेन्ट इन्जिनियरिङ रिसर्च इन्स्टिच्यूट (निरी)को अगुवाइमा एउटा गज्जबको आविष्कार भएको छ...
बारीमा काम गर्न गएकी...
अजिंगरको बारेमा धेरैले सुन्नुभएको होला । हाम्रो घर तिर त्यति ठुलो सर्पहरु पाइने गर्दैनन् तर अरु देशहरुमा भने अझै मानिसलाई निल्न सक्ने खालका अजिंगरहरु पाइने गर्दछन । इण्डोनेसियामा एक डरलाग्दो घटना घटेको छ । दक्षिण पूर्वी सुलावेशी प्रान्तमा आफ्नै बारीबाट बेपत्ता भएकी एक जना...